Zvinorevei iyo iPhone kukiya kumusoro kwepamusoro kona inorevei? Pop ➡️ Android Pop ▷ ➡️
Zvinorevei iyo iPhone kukiya kumusoro kwepamusoro kona inorevei?
Alexander anotinyorera. Mune yake meseji anotiudza kuti imwe nguva yapfuura akatengera iPhone nyowani kumukadzi wake (iyo modhi yechigadzirwa haina kutaurwa), uye mushure mekanguva kiyi yekukiya ine museve yakaonekwa mune yekudyara bar. Alexander anoshamisika kuti iyo icon inorevei uye kana achifanira kunetseka.
Chokwadi, iro rakakiyiwa muchimiro chedenderedzwa rinogona kuoneka mukona yekumusoro kurudyi, ndiwo maratidziro ayo (semuenzaniso pane iyo iPad, pane iyo iPhone iyo padlock yakafanana chaizvo):
Alexander, hapana chikonzero chekufunganya. Chinhu chacho ndechekuti, iyo icon yakatsanangurwa mu status bar inoonekwa kana iwe kana murume / mukadzi wako mukakiya kutenderera kwescreen (screen orientation change) Ndokunge, kana uchidzikamisa chishandiso, iko kutarisisa hakuzo shanduke kubva pamufananidzo kuenda kunzvimbo.
Kuti ubvise kiyi, ndiko kuti, kubvumira iyo skrini kuti ichinje maitiro, swipe kumusoro kubva pasi pechidzitiro kuti uunze menyu senge iyi. Mune menyu, pinda padiki inoratidzwa nemuseve.
Sezvauri kuona, zviri nyore.
HiVoice Huawei: chii ichi chishandiso?
Nhare mbozha neQualcomm Snapdragon 845 processor
Iyo yakanakisa VERTEX nhare mbozha: katarogu nemitengo nemifananidzo
Maitiro ekushandura nhare mbozha yeApple kuita remote control yeTV
Maitiro ekuvandudza mafoni eHuawei kuApple 10